Dhibaatooyinkala qabsiga | Suomen Mielenterveysseura
La qabsashada dhibta leh wuxuu ka dhalan karaa wax kasta oo ficil ahaan ama maaddo ah loola qabsado, taas oo leh dareen maanku jecleysto tusaale (cunidda, mukhaadaraadka, cayaaraha...). Qabatin ama la qabsashowaxaa laga wadaa marka qofku diyaar u yahay in waqti badan ku lumiyo isticmaalka maaddo, tusaale ahaan cayaaraha ama khamaarka.
Haddii isticmaalka maaddada ama ficilka aysan suurtogal aheyn, qofku wuxuu dareemayaa cidhiidhi iyo jaahwareer waxaa kaloo suurtogal ah inay yimaadaan calaamado kala duwan oo la xidhiidha joojinta maaddada ama shayga la qabatimay. Qabtinka qofka u rafaadsan wuxuu sii wadaa isticmaalka maddooyinka isagoon marnaba eegeyn dhibaatooyinka bulsho iyo caafimaad ee ay ku hayso.
Aad ayaa loo daaweeyn karaa la qabsiga, qofkuna si xornimo ah ayuu uga go,i karaa. La qabsashada kala duwan waxaa loo hindisay qof walba siyaabo kala duwan oo lagu caawiyo. Bogga maandooriyaha ayaad ka heli kartaa ama oo kala duwan. Qabatinka waxaa looga gudbi karaa qirashada dhibaatada iyo in ay dhab ka tahay isticmaalka joojinta maaddooyinka keenaya qabatinka ama saamayntooda.
La qabsashadu wuxuu ahaan karaa bulsho ahaan, maskaxiyan, ama jidh ahaan ama dhamaantood isku waqti. Qabatinka bulshada macnaheedu waa in aad qabatinto koox, kooxdaas oo isticmaasha maaddooyinka keena qabatinka. Tusaale ahaan marka da'da iskoolka lagu bilaabo sigaarka waxaa la xidhiidha badanaa nooc cadaadis ah oo lagala kulmo kooxda.
Qabatinka maskaxiyanka wuxuu soo if baxaa tusaale ahaan ka dib, marka maadooyin la isla og yahay ama wax qabad laga raadinayo nefis yar ama si qasab ah arimo culus. Maadooyinka la qabatimay ayaa kiciya ama wax qabad la,aan ayaa kalifta dareeen xoogan oo leh cadhiidhi iyo cadho. Waxqabad la,aanta jidh ahaaneed ayaa si cad u soo muujisa dareenada, sida madax xanuun, dhidid, gariir ama hurdo la,aan.
Qabatinku inuu horumaro waxaa keena qibrad uu qofku u leeyahay, xaaladdaha adag ee nolosha iyo waxaad hiddo u leedahay ayaa la cadeeyay in qayb ka tahay. Qabatinku wuxuu noqon karaa waxaad baratay tusaale ahaan in aad sigaar cabto marka aad ka xanaaqdo xaalad soo socota. Qabatinku wuxuu ka dhalan karaa sidoo kale xaaladda adag ee nolosha iyo nolosha qalafsan oo wada jira, tusaale kurbada oo la isku dayo in alkol lagu baabi`iyo.
Sidoo kale waxyaabaha aad dhaxal u leedahay ayaa lagu tilmaami karaa in uu saameyn ku leeyahay qabatinka. Tusaale ahaan awooda fiican ee alakol cabida aan caadiga ahyn ayaa la cadeeyay in ay si uun u tahay hiddo, taas oo keenta koritaanka qabatinka alkolka.
La qabsiga daryeelka
Qabatinada marka la qiyaaso Finnland waa dhibaato aad u weyn dhibaatooyinkaas waxaa laga bixiyaa noocyo daryeel oo badan. Qof walba gaarkii ayaa loogu dooraa iyadoo loo eegayo nooca daryeelka ku habboon. Daryeelku wuxuu ahaan karaa tusaale teraabiyada wada sheekaysiga gooni ahaan ama koox ahaan ama la sheekaysi dadka ka bogsaday mar hore qabatinka, ama teraabiyada waxqabadka, daryeel dawo ama siyaabo kala duwan oo qofku isku daryeelayo.
Dadka u xanuunsan la qabsashada maandooriyaha doonashada daryeelka waxay ka bilaabaan rugtooda caafimaadka, xaafiiska arimaha bulshadda ee magaalada, shaqada ama kalkaalisada caafimaadka ee iskoolka. Badanaa magaalooyinka kaliinikada-A ayaa siisa daryeelo kala duwan dadka u xanuunsan dhibaatada qabatinka iyo eheladooda. Daryeelada kale waa kuwa ay bixiyaan xarumahadhalinyarada, xarumaha daryeelka ka reebista iyo daryeelida maandooriyaha xaruntabaxnaaninta qabatinka qamaarka dadka u dhibaataysan waxaa caawimaad siiya sida Peluuri peluurigu wuxuu leeyahay tusaale telefoon heegan ah.
Qofka u xanuunsan qabatinka way fiicnaan lahayd inuu ka fakaro gabi ahaan xaladadaha noloshiisa. sidee qabtinku ku biloowday? Xagee ayay ka socotaa dhibaatada qabatinku? Ma awoodaa in aan saamayn ku yeesho arimahaan, ii geeysanaya dhibaatooyinka caafimaad naf ahaaneed? Maxaan sameyn karaa oo ku badeli karaa waxyaabahaan ii keenaaya isticmaalka maandooriyaha iyo qabatinka?
Ka go,i taanka qabatinka badanaa wuxuu u baahan yahay isbedal aad ku samayso dhaqankaaga. Qofka ka bogsoonaya qabatinka waa in uu si taxader leh waqti ka hor u qorsheeyaa, siduu xaaladahan wax uga qaban lahaa, siduu uga nabad geli lahaa una diidi lahaa waxyeelada maandooriyaha iyo waxyeeladiisa qabatinka. Dadka qaar siday uga go,aan qabtinka waxaa dhici karta in ay fududahay, dadka qaarkoodna waa mid u baahan isbedelo waaweyn oo ah qaabka ay u fekeraan, dhaqankooda iyo hab dhaqmeedka noloshooda.
Warbixin dheeraad ah oo ku saaban daryeelkooda waxaad ka helaysaa linkigamaandooriyaha.
La qabsiga khamriga
Isticmaalka badan ee khamriga waxaa la og yahay in uu dhibaato u keeno caafimaadka dhimirka. khamrigu waxaa laga yaabaa in la is yiraahdo ku baabi’i kurbada iyo cabsida tusaale ahaan xaaladaha bulashada gudaheeda iyo xaaladaha adag ee nolosha. Isticmaalka khamriga ee si isdabajoog ah ee isku xigxigga loo qaato wuxuu uga sii daraa kurbada iyo niyadjabka iyo weliba inuu keeno argaggax kedis ah. Khamrigu wuxuu wax u dhimaa qiimaha hurdada, taasoo hurdo la’aanteedu aan laheyn wax dawo ah.
Halka kurbada kharmriga miciin laga doonayo waxaa badelkeeda habboon tusaale ahaan in kaalmo laga raadsado teraabiyada cilminafsiga, daryeelka caafimaadka shaqaalaha ama xarumaha kale ee caafimaadka, shaqaalaha xarunta dhibaatooyinka ama tusaale ahaan hab wadahadalahaaneed ee arrimaha xaaladdaada nololeed ee Tukinetti s­­i gooni ahaaneed adiga iyo shaqsiga wax caawiya ama kulan wadar ahaaneed. Haddii khamrigu gaaro heer qabatin, waxaa suurtogal ah inay salka ku hayso xanuunka dhimirku daryeelkuna uu dhib noqon karo.
Khamriya cabnimadu ama aalkoliistenimadu waa dhaqan isticmaal khamri aan ladeyn karin, iyadoo naan la kala jecleyn dhibka dhanka bulshada iyo caafimaadka. Inta badan dadka leh qabatinka khamriga waxay awood u leeyihiin iney u adkeystaan cabidda khamriga xaddi badan ilaa ay ka gaadhaan heerkii markii hore. Sii wadidda isticmaalkaas in la qabsigu keeno calaamado darran xataa waa mid caadi ah. Qabatinka khamriga waxaa muuqan kara xitaa inay badato dulqaad la’aanta ama inay muuqato caalaamada qabatimadka. U adkeysashada badan ee khamrigu waxay siyaadin kartaa inay badato khatarta qabatinka khamrigu.
Qofka qabatimay khamriga way adag tahay inuu kontoroolo isticmaalkiisa khamriga: Wuxuu u isticmaalaa khamriga si fudud oo qorsheysan in badan ama muddo dheer, ka kabsashada isticmaalka khamriga ama deyntiisa waxay qaadataa xaqiiqdii waqti mana awoodo qofku isagoo raba inuu dhimo ama joojiyo isticmaalka khamriga isagoo og xataa dhibaatadiisa.
Qabatinka khamriga waxaa qayb weyn ka ah hiddaha. Qofka qaba ama leh hiddo u keenaya xanuunka xanuunka aalkolistinimada, isticmaalka khamrigu waxaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho ama isbedel ku keeno waxqabadka maskaxda. dadkaasi suurtogal ma aha inay kontoroolaan ama yareeyaan isticmaalka khamriga iyo fursadda kaliya ay haystaan waa in gabi ahaanba la mamnuuco. Daryeelka qabatinka khamriga waxaa laga codsan karaa tusaale ahaan bukaansocodeegtada xaafadaada, xafiiska soshalka ama A-klinikan.
La qabsiga dawada
Dawooyinka caadiga ah sababa qabatinka waxay yihiin kuwa si dhaqso leh jidhku u qaato oo ay kamid yihiin dawooyinka kurbada iyo hurdo la’aanta iyo weliba daawooyinka xanuun bi’iyaha. Tusaale ahaan daawooyinka niyadjabka waxaa saameyntooda bilaabantaa inta badan usbuucyo ka dib, sidaas dardeed si khaldan oo loo isticmaalo ama la joogteeyo marnaba lama qabatimo. Dawo qabatin waxaa leh daawooyinka fiyoobi degdeg ah keena, fiyoobidaas oo keenta in jidhku qabatimo, sida dawooyinka kurbada iyo madax xanuunka.
Ka hortagga dawo qabatinka tusaale ahaan sida dawooyinka loogu talagalay kurbada iyo hurdo la’aanta waa in loo qaataa sida uu dhakhtarku u amray in loo qaato. Haddii dawada qaadashadeedo dheeraato ay dhaafto muddadii la joojin lahaa, inta badan dhakhtarku wuxuu dhimaa xadiga dawada si looga hortago calaamadaha qabatinka. Haddii ay timaado daawo qabatin, waxaa caawaniaad laga raadsankaraa tusaale ahaan bukaansocod eegtada ama A-klinikan. Daawo qabatinka iyo macluumaadka la xidhiidha waxaad faahfaahin dheeraad ah ka heleysaa kiliikinada maandooriyha.
La qabsiga Internetka
Internet qabatinku ma aha su’aashu muddo intee le’g ayaa inernetka la isticmaalay, ee waa waxyeelada uu keeno internetka tusaale ahaan xidhiidhka qofku la leeyahay dadka iyo caafimaad ahaanba. Qofka qaba internet qabatinka wuxuu dareemaa baahi ku khasbeysa inuu waqti siiyo tusaale ahaan kanaalada kulanka, sheekeysiga ama bogagga sekiska. Qabatinka waxaa la arki karaa tusaale ahaan ku khasbanaanta fiirinta e-maylka. Qabatinku ma aha mid internetku isagu leeyahay, ee waa fursado khayaali ah oo uu keenayo tusaale ahaan xiiseyn badan ama ka helitaan.
Internet qabatinku waa ifafaale sideedaba cusub, oo aanan si fudud loo qeexi Karin. Dadka intiisa badan ee isticmaasha internetka wuxuu u lee yhay faa’iido iyo waxyeelo la’aan, iyo qaar dadka kale ee isticmaala wuxuu u keenaa qabatin iyo waxyeelo fudud. Haddii aad dareento in isticmaalka internetkaagu badan yahay, ama sababo dareen is eedeyn leh iyo in caafimaadkaaga ama qoyskaaga ka go’do, isticmaalka internetkana aad mudnaan badan siiso. Internet qabatinka iyo caawinaad raadsashadiisa waxaad ka heleysaa faahfaahin dheeraad ah kiliikinada maandooriyha.
La qabsiga Khamaarka
Khamaar ciyaaridda wadankan Finland waxay ka mid tahay madadaalada ugu caansan. Ciyaaridda khamaarku waa mid qofku ku doonayo inuu ku taajiro ama xiiso u leh ama uu waqtiga ku lumiyo. Dadka qaba khamaar qabatinka ma aha qof xukumi kara ciyaaristiisa oo iskacelin kara, tusaale ahaan lacag intee le,eg ayuu rabaa inuu ku ciyaaro. Cayaaristu waxay keeni kartaa dadka leh khaamaar qabatinka ceeb xoogan iyo kurbo, laakiin iska joojintiisa ma suurtogasho. Cayaaristu waxay dadka qaba khamaar qabatinka u keentaa inay waqtiga ku dilaan iyo iney isku dayaan inay isku ilowsiiyaan kurbada iyo dareenada xun.
Khamaar qabatinku wuxuu u horseedi karaa dhaqaale xumo darran iyo dhibaatooyin dhanka xidhiidhka dadka iyo shaqada. Khamaar qabatinka waxaa kaloo la xidhiidhi kara niyadjab ama dhibaato maandooriye, sidaas darteed niyadjab uu keeno khamaar qabatinka ama qabatinka mashaakilada uu keeno waxay daaha ka qaadaan soo ifbaxa niyadjabka. Markii qabatinka la isku dayo in laga qariyo xigaalada, inta badan waa mid soo ifbaxa markii cayaaristu mashaakilkeeda ay kordhaan.
Waxaa jira fursado badan oo daryeel ah oo loogu talagalay dadka khamaar qabatinka leh. Tusaale ahaan A-klinikat iyo Peluuri waxay ka caawiyaan xaaladaha marka ay cayaaristu faraha ka baxdo. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khamaar qabatinka waxaa laga helaa kiliikinada maandooriyha.